वात्सल्य प्रेम | मझेरी डट कम
editor — Sun, 09/06/2020 - 17:01
प्रहरी कार्यालय परिसरभित्रको एउटा कोठामा दुई युवती खडा थिए । उनीहरू घरीघरी आफ्नै पेट मुसार्थे । घरीघरी भने माइकको आवाज सुन्न नसकेर कान थुन्न पुग्थे । आवाज अँझ थपिँदै जान्थ्यो । त्यसमाथि नजिकैको मस्जिदबाट मुस्लिम समुदायको साँझको प्रार्थना सुरुआत भएको सङ्केतको आवाज पनि थपिन्थ्यो । र, आवाजै आवाजले सदरमुकाम नै जर्याकजुरुक उचालिन थाल्थ्यो ।
युवतीहरू खडा भइरहन सक्दैनथे । केहीबेरमै थ्याच्चै बस्थे । र, निकैबेर दुवै कान थुनिरहन्थे । घरीघरी कान दाब्न खुकुलो पार्थे । बाहिरको आवाज कम भयो कि भनेर जाँच्थे । आवाज उस्तै एकनासे आइरहेको महसुस भए पछि भने कान बलियो गरी थुनिरहन्थे ।
रात छिप्पिँदै गएपछि सडक पनि निर्जनतामा पऋणत हुँदै जान्थे । माइकको आवाज समेत मधुरो हुँदै हराएर जान्थे । युवतीहरू पनि पेटपूजाका सामग्रीहरू जोहो गर्नतिर लाग्थे । काँचोकचिलो दुई–चार गाँस टिपेर दुवै विस्तरामा ढल्किन्थे । उनीहरू कहिले मैथिली त कहिले नेपालीमा कुरा गर्थे ।
एक पटक आफ्नो पेटमा केले हो लात हान्दै छ भनेर अकस्मात् जुनुले मुख खोली, “दिदी ! हम त छक्क पैरगेल छी । हमर पेटमे लात मारै जोखा लाइगरहल छै । आब कथि हेतो ? तोरा केना हैछै ?”
“चुप लाग् गे, यहेन बात करेते काहीँ ?” कानैनेर मुख लगेर शान्त स्वरमा मुनुले चुप रहन भनी ।
“चुप, केको चुप ! हामीले चुप लाग्नुपर्ने कुनै काम गरेका छैनौँ । मान्छेको अदालतमा त के ईश्वरको अदालतमा पनि म डुक्रिन्छु । केको लाज र शरम ! गल्ती गर्ने एउटा, लाज मान्नुपर्ने चाहिँ हामी निरीह युवतीले ?” जुनुले असन्तोषी मन खोलिरही ।
“बहिनी ! सुस्तरी बोल् न ! यहाँका ड्युटीका पुलिसले सुन्लान् । सारा इज्जत त गुम्यो, गुम्यो । बचेको थोरै इज्जत पनि यहाँ आएर लिलाम होला ! ठुला दर्जाका पुलिसलाई थाहा भए पनि हामी कस्ता किसिमका अपराधी हौँ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहै छैन । तसर्थ मनका कुरा मनमै लुकाएर राख् ! जस्तो समय आउँछ, खेप्दै जानुपर्छ, सहँदै रहनुपर्छ । तर, नारी इज्जतको धज्जी उडाउनुहुन्न, कुरा बुझिस्, हैन ?” मुनुले मनको ऊहापोह पोखेर शान्त भई ।
जुनुले चित्त बुझाउनै सकिन, “जे भन् दिदी ! बहिनी त तेरै हुँ । स्वभाव चैं तेरोजस्तो डरपोक छैन । म त भन्छु– आफूले कसैमाथि अन्याय गर्दै नगर्नू, कसैले आफैँलाई गर्छ भने त्यसलाई छाड्दै नछाड्नू !”
मुनुले दिक्कलाग्दो अनुहार बनाएर हेरिरही । जुनु सकसमा परी । र, धिमा आवाजमा भनी, “तनाव नले दिदी ! जस्तो पर्छ, त्यस्तै टर्छ ! पेटमा एक–एक वटा भविष्य बोकेकै छौँ । तिनैलाई समालौँला । तिनीहरूले नै परिचय देलान् । समाजले हामीलाई बिर्से, बिर्सियोस् ! हाम्रै भविष्यलाई असल मनुष्य बनाऔँला । र, समाजका प्रतिष्ठित आमा कहलिऔँला । हुन्न, दिदी ?”
“तँ केके भन्छेस्, भन्छेस् ! आपत्मा त धैर्यले काम लिनुपर्छ । बढी क्रान्तिकारी बनेर काम छैन । क्रान्तिको अध्याय हामीले सिध्याइसक्यौँ । अब मनमा शान्तिलाई स्थान दिनुपर्छ । पेटको परिचयहीन भविष्यलाई शान्तिले हुर्कन दिनुपर्छ । मनमा क्रान्तिको ज्वाला दङ्काएर अबोध बच्चालाई गर्भमै तड्पाउनु बुद्धिमान आमाको कर्तव्य विल्कुलै होइन ।”
मुनुका कुरा सुनेर जुनु प्रसन्न हुन्छे । एकाएक मनका सारा क्रोध र ग्लानिहरू रछ्यानमा मिल्काइदिन्छे । ख्याक् गर्छे, झ्यालबाट बाहिर थुक्छे । र, बाहिरकै दृष्य नियाल्न खोज्छे । बाहिर निष्पट्ट अँध्यारो मात्रै देख्छे । त्यही अँध्यारामा सुन्दरता खोज्ने प्रयास गरिरहन्छे ।
“बहिन गे ! तुँ त चुप लागगेलिही ! कि खिस्या गेलिही ?” मुनुको मनमा जुनु रिसाइकी भन्ने लाग्छ ।
हत्त न पत्त जुनु मुख खोलीे, “केको रिसाउनु ! ममतामयी आमा भने पनि, अभिन्न सँगिनी ठाने पनि तैँ एउटी त होस् नि ! तँसँग पनि रिसाएर म कोसँग खुसाउनू ! वास्तवमा तैँले भनेका कुराहरू जँचेर म चुप भएकी हुँ । तेरो सोच र समझ ऊध्र्वगामी रै’छ । म चै तत्कालै पऋणाम खोज्दी रै’छु । तेरो जित भो । अब जे भन्छेस्, त्यही मान्छु । आखिरमा तेरै बहिनी न परेँ ।”
दुवै खुशी हुन्छन् । आ–आफ्ना विस्तरामा पल्टिन्छन् । केही बेरमै निद्रादेवीको काखमा लुट्पुटिन पुग्छन् ।
खासमा मुनु र जुनु पूर्वी तराईका मध्यम परिवारका मैथिल समुदायका चेलीहरू हुन् । विद्यालयस्तरमा दुवै अब्बल विद्यार्थी गनिन्थे । एसएलसी परीक्षामा मात्रै नभई विज्ञान संकाय तर्फ १०+२ को परीक्षामा समेत दिदी–बहिनी क्रमशः जिल्ला प्रथम र दोस्रो हुन्थे । उनीहरू ८/१० अङ्कले मात्रै अघिपछि हुन्थे ।
सिर्जनशील क्षमता लोभलाग्दो भए पनि जुनुको हडबड गर्ने बानी थियो । त्यसैले ऊ परीक्षामा प्रश्न छुटाउँथी वा एकाध प्रश्नको राम्रो उत्तर लेख्न समय भ्याउँदिनथी ।
परीक्षा हलबाट बाहिरिएर ऊ केहीबेर आफ्नै बेहोसीपनलाई धिकार्थी । मुनुको मुहार देख्नासाथ भने सारा चिन्ताका बादलहरू एकाएक गायव हुन्थे । र, सोच्थी, “घिउ कहाँ पोखियो, आफ्नै भागमा” भनेझैँ आफ्नै दिदी त फस्ट हुने हो नि । केही प्रश्नको उत्तर कमजोर नहुँदो हो त कसलाई फस्ट पार्नु, कसलाई सेकेन्ड ! सरहरूलाई पनि द्विविधा पर्दो हो । फेरि सधैँ सबैलाई जितेकी दिदी, मसँग हारेर सेकेन्ड भई भने कालीनीली हुँदिहोली ।”
मुनुले भेट्दा जुनु मुस्कुराइरहेकी हुन्थी । मुनुको प्रश्नको जवाफ दिँदै जुनुको सदाबहार उत्तर हुन्थ्यो, “मैले कस्तो लेखेँ, तँ फिक्री नै नलिई न । रिजल्टको कुरो गर्न ! तँ फस्ट, म सेकेन्ड ! हेर्दै जा ! हामी दिदीबैनीलाई कसैले टप्न सक्दैनन् । कर्म गर्दै जा न, फलको लोभ नगर् । फल स्वतः हात पर्छ । टेन्सन बन्दै नले न !”
“भो, भो ! प्रवचन बन्द गर् । गीता दर्शन पनि नफलाक् । हामी कसैलाई जितेर विजयको माला पहिरिन जन्मेका हैनौँ । हामी त सबैलाई जिताएर खुशीको वर्षा गराउन आएका हौँ । हामीले अरू अघि बढे मात्र जित्न सकिन्छ भन्ने ठान्नुपर्छ । बरू पछिरहे कहिल्यै जित्न सकिन्न भन्ने मान्नुपर्छ ।”
जुनु वाल्ल परेर हेरिरहन्थी । मुनु अगाडि थप्दै जान्थी, “अहिलेसम्म हामीले जित्न सकेका छैनौँ किनकि हाम्रो छेउछाउमा कोही पनि हामी नजिक आउन सकेका छैनन् । शिक्षकहरूको मनमस्तिष्कमा हामी दुईले मात्र एकछत्र राज गरेका छौँ । भनौँ न, अरूको भाग खोसेर कप्ल्याककुप्लुक पारेका छौँ ।”
“अँ, पढ्ने बेलामा केटाहरू खोप्पी र गुच्छामा भुल्छन् कि बल्छी लिएर माछा मार्न खोलातिर दगुर्छन् । केटीहरू घरपरिवारको चुलोचौकोमा व्यस्त हुन्छन् । फुर्सद मिल्दा घाँसपात र मेलापात गर्नमै आफ्नो भविष्य देख्तछन् । अनि परीक्षा हलमा चिट र गाइडबाट लेख्न खोज्छन् । त्यसो गर्दा कहाँ नम्बर पाइन्छ त ! हामीजस्तो पारिवारिक मर्यादा र आत्मानुशासनमा बस्ने हो भने मात्रै तेरो सिद्धान्त लागू हुन्छ । सबै लेखपढमा अब्बल हुन्छन् । विद्यार्थी जीवनको मूल्य र महत्त्व बुझ्छन् । अनि मात्रै तेरो सिद्धान्तले व्यवहारमा मूर्तरूप लिन पाउँछ ।”
उनीहरूका बीच यस्तै संवाद हुन्थे । विद्यालयीय शिक्षा सकेर दुवै राजधानी छिरे । इञ्जिनियरिङ लाइनमा माष्टर डिग्री सिद्धयाए । नोकरीको खोजीमा तयारी कक्षा लिने विचारमा थिए ।
बर्दिबास–सिन्धुली हुँदै काठमाडौँ आवतजावत गर्ने क्रममा उनीहरू दुवै एकै पटक दुर्भाग्यको सिकार भए । त्यस घटनाले उनीहरूको जीवनको गति र वेग नै बदलियो ।
जुनूलाई चिठीमार्फत छाद्ने मन भयो । उनी आँखा रसिला पार्दै लेख्न थालिन् । कलमले रुक्ने नामै लिएन–
ममतामयी मामू !
म झण्डै बहुलाएँ । समाजका आँखामा त अँझ पनि बहुलाएकै छु । यद्यपि म स्वय म भने भन्दै छु– म झन् सद्दे भएकी छु । म पहिलेभन्दा बढता नै सचेत भएकी छु । अचेल अँझ गहिरिएर जीवनलाई बुझ्ने गरेकी छु । तीतो सत्य ओकल्न गाह्रो छ । माफ गर्नुहोला– अचेल तपाईंकै ब्याजलाई रातोदिन पोषण गर्न व्यस्त छु ।
मामू ! अचेल म रातको निष्पट्टतामा पनि सुन्दरी नर्तकीहरू नाचेको देख्छु । दिनको मानवीय कोलाहलमा समेत अनमोल ऊर्जा छरिएको भेट्छु । दिनको प्रचण्ड तापले तिर्खाएको प्रकृतिले जूनेली रातको शीतलता पिएर प्यास मेटेको पाउँछु । साँझको झ्याउँकीरीको आवाजमा नौमती बाजाको धुन सुन्छु । रातको ओछ्यानको लामखुट्टे उर्दीमा चेतावनीको तुफान भेट्छु । अँझ गल्लीका भुस्यहाँ कुकुरहरूको बेतुकको भुकाइमा उट्पट्याङ समाजलाई झापड देख्छु । रात परेपछि छेउकै चौतारामा रात गुजार्न तेर्सिने बौलाहाको भोक र जाडोले काँपेको क्रन्दनले समाजको उछितो काढेको पाउँछु ।
आज जुनु अनर्गल कुरामा किन अल्झाउँदै छे नभन्नुहोला । तपाईंका दुवै छोरीहरू परिस्थिति र परिबन्दका दासी भयौँ । हामी दुवैले एक कोरी उमेर पार गरिसकेछौँ । नेपालको कानूनका हरेक हाँगाबिँगाका दृष्टिले वालिग भइसकेछौँ । अब आफ्नै खुट्टामा टेकेर अरूलाई छहारी दिनसक्ने भइसकेछौँ ।
मामू ! दुःख गरेर बढाउनुभो । ठूल्ठूला सपना संगालेर काठमाडौँ ल्याएर पढाउनु भो । देशको दक्ष इञ्जिनिएर पनि बनाउनुभो । अब फल पाक्यो, परिवारका दुःखका दिन गए, सुखको सूर्योदय हुने अवस्था आयो भन्नुहुन्थ्यो होला । हामी समयको दासी बनेको चाल पाउँदा सम्मालिन गाह्रो पर्ला ।
मामू ! धेरै दिनलाई होइन । सिर्फ केही समयका लागि हामी बन्धनमा जाकियौँ । बन्धनमुक्त भए पछि हाम्रो पुनर्मिलन हुने नै छ । सत्य थाहा पाएर आँखाभरि आँसु नपार्नुहोला । शरीरलाई सुक्न र मनलाई रुग्ण हुन नदिनुहोला । शत्रुलाई हाँस्ने र पराईलाई कुरा काट्ने मौका बिल्कुलै नदिनुहोला ।
मामू ! यस पत्रकै साथमा दिदीले बुबालाई लेखेको पत्र पनि छ । हजुरहरूले मन बलियो बनाएर पढ्नुहोला । र, सोच्नुहोला– छोरीहरूले जे गरेछन्, दिएको संस्कार अनुरूप गरेछन् । मातृबात्सल्यमा मोहित भएछन् । समाजको लाञ्छनासँग जुध्न कम्मर कसेछन् । स्वावलम्बी शिक्षा आर्जनको वातावरण तयार हुँदै जाने हो भने समाजमा लैङ््गिक विभेद मक्किँदै जान्छ । महिला हिंसा न्यूनिकरण हुँदै जान्छ । महिलालाई सशक्त पार्दै हिँड्ने हो भने महिला स्वयम्ले नयाँ संस्कारयुक्त समाज निर्माण गर्न अवश्य सक्छन् । अँझ अपराधीहरूलाई दण्डको दायरामा ल्याई पीडितलाई राहत दिलाउने हो भने दिनानुदिनु हिंसा घट्दै जान्छ । र, एक दिन नेपाल महिला हिंसामुक्त राष्ट्र घोषित हुन्छ ।
मामू ! तपाईंले भनेका कुरा अहिले पनि मेरो मस्तिष्कमा ताजै छ । तपाईं भन्नुहुन्थ्यो– मानव सृष्टिमा नारी माया र दयाको खानी हो । जगतैलाई उज्यालो पार्ने सौन्दर्यको रानी हो । सहनशिलताको प्रतिमूर्ति हो, आस्था र विश्वासको धरोहर हो । समाजका शब्दरूपी भालाले मुटु छियाछिया पारिदिए पनि मनको पीडा पिएर र पचाएर केवल मुस्कान ओकल्ने अद्भूत कलाकार हो । सृटिको संरक्षक र समाजको अमूल्य गहना हो ।
तपाईं अगाडि भन्नुहुन्थ्यो– हाम्रो समाजले नारीप्रति सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानिसिक, सांस्कृतिक रूपले अमानवीय, अपाच्य, अनैतिक तथा अवैधानिक क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ । दिनानुदिन समाजमा देखिएका र आमसञ्चारहरूमा समेटिएका बलात्कार, बोक्सी, दाइजोको नाममा गरिने कुटपिट तथा ज्याजतीका घटनाहरू दिनदिनै बढ्दा छन् । व्यथित मनको रोदन र भित्रभित्रै दबेको क्रन्दनबाट निस्केको आँसुले हरेक रात सिरानी भिजाउँने पनि नारी नै भएका छन् ।
मलाई लाग्थ्यो– यस्ता कुराहरू सुन्दर, शान्त, सुखी र समृद्धिको पथमा अग्रसर हाम्रोजस्तो राष्ट्रका लागि तगारो हो । अब व्यवहारमै नारी र पुरूष एक रथका दुई पाङ्ग्रा बन्नुपर्छ । देश विकासको यज्ञकुण्डमा पुरुष चरु बनेर र महिला सुरो बनेर होम गर्नुपर्छ तब मात्र विकासको मूल फुट्न सक्छ ।
तपाईं भन्दै जानुहुन्थ्यो– अँझै पनि यो पितृसतात्मक समाजले महिलाको बोली, व्यवहार, भावना र सहभागितामाथि चोर औँलो उठाउँदै छ । जन्मँदै लैङ्गिक विभेदको रेखा कोर्दै छ । मानवता र नेपाली संस्कारलाई बिर्सिएर अबोध चेलीको इज्जत लुट्छ । चार वर्षीया बालिकालाई नरपशुहरूले बलात्कार गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै पश्चिम नेपालमा रजस्वला हुँदा छाउपडी गोठमा निस्सासिएर मृत्यु भएका मखमलीहरूको घटना सुन्नुपर्छ । कतै देउकी बनेर त कतै झुमा भएर नारी अस्मिता गुमाउनुपर्छ ।
मामू ! अहिले म यस्तो ठहरमा पुगेकी छु– कानमा रूइ कोचेर र हातमा दही जमाएर बसिरहे पीडितहरूको जीवनमा उज्याला दिन कदापि आउँदैनन् । पीडितमाथि परपीडकले राज गरिरहने छ । तसर्थ अब हामीले कान सफा गर्नु जरुरी छ । सधैँ सिर्जना र निर्माणमा रमाउने पाखुरीलाई विध्वंशमा उपयोग गर्नुपरे पनि खुट्टा कपाउनुहुन्न । देवीले अत्याचारी दैत्य संहार गरेर साधुजनको रक्षा गरेको पृष्ठभूमिमा महिला स्वयम्ले देवीझैँ बन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अपराधीेलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ र सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ । आफूले रचेको दृष्टान्तले अन्य मानिसहरूलाई पनि चेतनशील र सतर्क बनाउने काम गर्नुपर्छ ।
यसका लागि सर्वप्रथम लाखौँ नारीहरूको जीवन घर न घाटको बनाउने अपराधीक गिरोहको सूची तयार पार्नुपर्छ । हरेक न्यायालयका कुनाकाप्चामा थङ्किएका महिला हिंसाका मुद्दाहरूका पोकापन्तेराको धुलोमैलो टक्टक्याउनुपर्छ । न्यायपालिकालाई नातावाद, कृपावाद राजनैतिक संरक्षण, भनसुनको हावाले छुन दिनुहुन्न । न्यायालयको निर्णयबाट रुष्ट बनेर ‘मेरो न्याय मर्यो, न्याय दे’ भनेर अर्को जुलुस थपिने काम विल्कुलै हुनुहुन्न । आफ्ना पीडित जनताका पक्षमा राज्य स्वय म सचेत र सक्रिय रहनुपर्छ । शक्ति र जिम्मेवारीलाई विकेन्द्रीकरण गरी महिला हिंसाको पहिचान गर्नुपर्छ । परपीडकलाई दण्ड र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित सम्मानजनक जीवन जिउने गरी समाजमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ ।
हो, मामू ! यत्ति गर्न सके मात्र यो समाज नरनारी दुवैको हुन्थ्यो । कसैले चित्त दुखाएर गहभरि आँशु पारेर झोक्राउनु पर्दैनथ्यो । यहाँ मेरा कुरा सुन्ने दिदी खडा छे, घरमा सुनिदिने हजुर नै हुनुहुन्छ । तसर्थ म निर्धक्क मूल कुरो कोट्याउँदै छु–
मामू ! पाँचदिनदेखि हामी प्रहरी थानाको हिरासतमा छौँ । हाम्रो मुद्दा अदालतमा गइसकेको छ । सायद चाँडै फैसला हुन्छ । हामीले आफूहरूले गरेको अपराध कबुल गरेर कानूनको सम्मान गरेका छौँ । हिंसाको चक्रमा फँस्न विवश कहानीको सविस्तार फेहरिस्त सबैकासामु राखेका छौँ । र, उन्मुक्ति खोज्ने प्रकृयागत भूल गरेको स्वीकारोक्ति प्रकट गरिसकेका छौँ । आशा छ– कमै सजाय हुने छ ।
मामू ! भएको के हो भने हामी काठमाडौँ जाँदै गर्दा बाटैमा गाडी बिग्रियो । तीनघण्टा पछि मात्रै गाडी बन्ने सूचना पाइयो । हामी दुई दिदी बहिनी प्रकृतिको अनुपम सुन्दरताको अवलोकन गर्दै तल्तिर झर्न थाल्यौँ । त्यहाँ भेटिएका वनस्पतिहरू हाम्रा लागि अनौठा थिए । खोलामा देखिएका स–सानादेखि भीमकाय ढुङ्गाहरू हाम्रा लागि अनौठा थिए ।
हामी रमाउँदै थियौँ । मालबाहक ट्रक आएर हाम्रोसामु रोकियो । टाउको उठाएर के हेरेका थियौँ, पुरुष स्वर सुनियो, “बैनीहरू ! तल्तिर जाने हो भने गाडीमा बस्नुस् । त्यहाँ विशाल पार्क छ । प्रशिद्ध मन्दिर पनि छ । त्यहाँको दृष्य साह्रै सुन्दर छ । हामी मास्तिर पुगेर फर्किहाल्छौँ । फेरि यही गाडीमा फिर्नुहोला । भाडा लाग्ने हैन । जाने मन भए बस्दा हुन्छ ।”
सुरुमा त एक्कासि आएको त्यस्तो प्रस्ताव मन भएर पनि स्वीकार्न सकिएन । टाउको हल्लाएरै अस्वीकार गरेपछि ड्राइभर गाडीबाट उत्रियो । र, नजिक आयो । हामी अलिक पर सर्यौँ । अर्को खलासी चाहिँले भन्यो, “जाऔँ गुरुजी ! बहिनीहरू नजाने रे ।”
ड्राइभरले फेरि कर गर्यो । मैले नै मुनुलाई भने, “हिँड् न त, दिदी ! एक फेरा पुगेर आऔँ । नयाँ ठाउँको नयाँ अनुभव पनि लिई हालौँ । समय पनि छ । देवीको दर्शन पनि गरौँला ।”
बल्ल तल्ल दिदी तयार भई । गाडीमा बसियो । गाडी हिँड्न थाल्यो । हाम्रा बारेमा ड्र«ाइभरले सारा कुरा सोध्यो । बिनाहिच्किचाहट मैले नै बेलिविस्तार लगाएँ । केही बेरमा हामीलाई गन्तव्यमा उतारेर गाडी डाँडातिर लम्कियो । वरपर घुम्यौँ । पहाडी सुन्दर दृष्यमा केहीबेर हरायौँ । निक्कैबेर प्रकृतिको काखमा आफ्नो चञ्चलता बिसायौँ । समग्रमा हामी असाध्यै रमायौँ ।
केही बेरमै गाडी फर्कियो । हामी चढ्यौँ । पहिले आएको बाटो छाडेर गाडी अन्यत्रै जान थाल्यो । मैले स्मरण गराउँदा ड्राइभर भन्न थाल्यो, “पुग्छ, पुग्छ । पैलाकै ठाउँमा पुग्छ । आत्तिने काम छैन । हाम्रो साथ पाएपछि केहीको पिरलो मान्नुपर्दैन । एक क्षणपछि आनन्द वर्षन थाल्छ । त्यसमा नुहाउने हो, प्रेस बन्ने हो, अनि गन्तव्य पक्रने हो । कि कसो, बैकुण्ठे ?”
ड्राइभरका बदलिएका कुरा सुनेर र बैकुण्ठेले जुँगामा ताउ लगाएको देखेर हामी आत्तियौँ । हाम्रो अनुहार बदलिएको देखेर मेरो केशरासी मुसार्दै ड्राइभर फुस्फुसायो, “साह्रै कलिला तरुनी फेला परे । कसैले छुँदै नछोएका सुकुमारी मोरीहरू ! तिमरू एकैक्षण आफ्नो शरीर हामीलाई सुम्पिदेओ । र, आनन्दको महासागरमा डुबुल्की लगाओ ।”
भन्दाभन्दै जङ्गलको एक कुनामा गाडी रोकियो । दुवै राक्षस हामीमाथि आइलागे । सतित्व बचाउन भरमग्दुर प्रयास गर्दा गर्दै बैकुण्ठेको थप्पडले दिदीको नाथ्री नै फुट्यो । ऊ एउटा हातले नाक थुन्दै र अर्को हातले प्रतिकार गर्दै गई । आखिरमा उसले हार मानी बैकुण्ठे दिदीलाई निर्वस्त्र पार्न सफल हुन थाल्यो । मसँग जुधिरहेको ड्राइभरले त्यो दृष्य देखेछ ।
मलाई छाडेर दिदीतिर लम्किँदै भन्यो, “ए बैकुण्ठे ! तँ बहिनीलाई समाल् । म दिदीलाई समाल्छु । दिदी सजिलिरहिछ, पग्री हाली । बहिनी ज्यादै ज्याद्री कोरलिरहिछ । हात पार्नै मुस्किल !”
मैले पनि लामो दम लिएँ । नजिकै चुच्चो परेको ढुङ्गो रहेछ, टिपेँ । र, दिदीतिर नियालेको त ऊ रक्तमुच्छेल भइसकिछ । ऊ चिच्याउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिछ । ड्राइभरका तीखा दाह्रा दिदीको छातीमा गाडीएका थिए । उसका राक्षसी हातहरू दिदीको पाइण्ट खोल्न आतुर थिए ।
त्यसै बखत बैकुण्ठे ममाथि आइलाग्यो । खै, कहाँबाट तागत आयो, हिम्मत जाग्यो कुन्नि ! न्वारानदेखिको बल झिकेर बैकुण्ठेको शिरमा निक्कै पटक चुच्चे ढुङ्गो बजारेँ । ‘मारी है मोरीले ! मरेँ है आमा !’ भन्दै पर्तिर उछिट्टिएर ढल्यो । त्यसपछि त्यही ढुङ्गो लिएर ड्राइभरमाथि जाइलागेँ ।
ऊ दिदीलाई छाडेर प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा आयो । मदिरा पिएकोले होला उसको नौनाडी गलिसकेका थिए । त्यसमाथि बैकुण्ठे ‘पानी ! पानी !!’ भनेर मुख बाइरहेको दृष्यले पनि उसको होस उडेको हुनुपर्छ । त्यही मौकामा मैले उसको अनुहारमा जताततै प्रहार गर्न थालेँ । ऊ आँखा छोप्दै ‘मारी है राँडीले, मारी !’ भन्दै भुइँमै तेर्सिएर घुम्न थाल्यो । मैले पनि तीन–चार ढुङ्गा त्यसको जननेन्द्रीयमा पर्ने गरी हानेँ । ऊ झन् कोकोहोलो गरेर चिच्याउन थाल्यो ।
मुनुले मलाई रोक्दै भनी, “छाडी दे ! यिनीहरूका लागि सजाय यत्ति नै हो । हिँड्, भागौँ । कसैले देखे भने हाम्रै गल्ती भन्छन् । उस्तै राक्षसको फेला परे. . . !”
कता जाने केही थाहा थिएन । पानी जता बगेको छ, त्यतै गइरहे अवश्य तराई पुगिन्छ र मामूको काखमा पीडा बिसाएर मन हलुका पार्न पाइन्छ भन्ने लाग्यो । मैले मुनुको हात पक्रिएँ र तुफान दौडियौँ । अनकन्टार जङ्गल, बडेमानका ढुङ्गा र दायाबाँयामा विशाल पहाडबाहेक अर्थोक केही थिएन । घरीघरी वन्यजन्तुको खस्य्राङखुस्सुङ आवाज सुनिन्थ्यो । चराहरूको चिरबिराहट भने पीडा बिर्साउने खालको थियो । दौडमा हामीले निक्कै समय व्यतित गरिसकेका थियौँ । थकाइको सीमा थिएन ।
खोला किनारकै ढुङ्गामा बिसायौँ । र, पछि फर्केर हेर्यौँ । मान्छेको चालचुल थिएन । आकाशतिर हेरेको त घाम अघि नै गायव भइसकेको रहेछ । यद्यपि अँझै उज्यालै थियो । सायद डाँडाले छेलिएर होला घाम नदेखिएको ।
खोला छाडेर डाँडा उक्लियौँ । झयाम्म परेको झोक्री फेला पर्यो । त्यहीँ रात कटाउने निधो गर्यौँ । मुनु मेरा खुट्टा पक्रेर भन्न थाली, “बैनी ! तँ मेरा लागि साक्षात् देवी होस् । तैँले मलाई जीवनकै दुर्भाग्यबाट बचाइस् । तेरोजस्तो आँट र सहास मसँग रत्तिभर छैन । बुद्धिले काम नगरे सहासले गर्नुपर्छ, सहासमा बुद्धि हुन पनि सक्छ, मुढेबल मात्रै रहन पनि सक्छ भनेको सत्य रहेछ ।”
“आखिरमा म तेरै बहिनी हुँ । तैँले जुठो पारेको मामूको लाम्टो नै चुसेर शक्ति जम्मा पारेकी हुँ । तेरै साथ र सहयोगले सहास बटुलेकी हुँ । तैँले सिकाएको ज्ञानकै बलले यत्तिको चनाखी भएकी हुँ । तसर्थ मेरो सफलता र पराक्रम जे देख्छेस्, त्यसमा आफ्नो पनि हिस्सा देख्ने गर् । तँ साथमा भए पछि म पहाड पनि फोर्न सक्छु, खोलाका यत्रा ढुङ्गा पनि पगाल्न सक्छु । तसर्थ, हिम्मतले अघि बढ् दिदी ! सबै प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल बन्दै जान्छ ।”
हामी दिदीबहिनी बीच यस्तै कुरा भइरहे । गफैगफमा कत्तिखेर आँखा लागे । विहान जङ्गली कुखुरा बास्दा पो आँखा खुले ।
छ्याङ्ग उज्यालो भए पछि हिँडन सुरु गरियो । केही बेरमै सडक देखा पर्यो । पैदल हिँड्नका लागि खोलोभन्दा सडक बेस होला भन्दै माथि उक्लियौँ । सडकमा कसैले गाडी रोकेर तराईसम्म पुर्याइदेला कि भनेको ! त्यस्तो कोही फेला परेन । हामी पैदलै ओरालो भर्न थाल्यौँ ।
अकस्मात् प्रहरीको बाइक देखापर्यो । चालकसहित दुई जना मात्रै थिए । उही ड्राइभर र खलासीको दृष्य आँखा अघिल्तिर आयो । दुवै जना दौडियौँ । प्रहरी बाइक पछ्याउँदै आयो । ‘रुक ! रुक !! नभाग, नभाग !!’ भन्दै थियो । सुनेको नसुन्यै गरी हामीले सडक छाडिदियौँ र ओरालो खँदारियौँ ।
तल खोलामा पुगेर के श्वास मात्र फेरेका थियौँ, खै कताबाट अगिकै प्रहरीको सई टुप्लुक्क देखापर्यो । फेरि हाम्रो होसहवास् उड्न थाल्यो । सईले आश्वस्त पार्दै थरीथरीका प्रश्न सोध्यो । दिदी त बोलिनँ । तर, मैले चाहिँ सोझो मनले अघिल्लो दिनको भिडन्तको लामै फेहरिस्त बताएँ ।
दिदी कालीनीली भई । मौका छोपेर सईले कपट मन देखायो, “कानून हातमा लिने काम गरेछौ । केही छैन । तिमीहरू मेरो शरणमा आओ । शरण परेकालाई मरणमा पार्ने मेरो बानी छैन । म जे भन्छु । त्यही मान । यसमा तिमीहरूकै कल्याण छ ।”
उसले अगाडि थप्यो, “खलासीले त हिजै जिब्रो टोकेछ । ड्राइभरका भने दुवै आँखा फुटेका छन् रे ! टाउको र जननेन्द्रीयमा ठूलै चोट छ रे ! त्यो त बाँच्ला तर अन्धो भएर बाँच्छ । यस अपराधमा तिमीहरू दुवैलाई हदैसम्मको सजाय हुन्छ ।”
“बँच्ने विचार छ भने मेरो इरादा र इशारामा एकाध घण्टा नाच । ढुक्कले तराई पुग्ने छौँ । आफन्तसँग रमाउन भेट्ने छौँ । भन, मान्छौँ ?” उसले मुख मिठ्याउँदै अमूर्त प्रस्ताव तेर्सायो ।
हाम्रा ओठतालु सुके । धरती घुम्दै गएको अनुभव भयो । अब के गर्ने भनेर हामी आपसमा मौनसंवादमा अल्झिरह्यौँ । सईले हामीलाई डोहोर्याउँदै सुरक्षित स्थानमा पुर्यायो । ओठ भिजाओ भने मुखमा तीतो–टर्टो गन्हाउने झोल हालिदियो । निल्न सके शरीरमा फुर्ती आउने कुरा बतायो । निल्न नमान्दा पेस्तोल देखायो । र, भन्यो, “भनेको खुरुक्क मान । नत्र एकै गोलीमा दुवै ढलौला । अपराधी भाग्दाभाग्दै कारबाहीमा परेको व्यहोरा बनाएर कामकुरो सिद्धयानु नपरोस् नि !”
मुटुले ठाउँ छोड्यो । ऊ पियाउँदै गयो । हामी पिउँदै गयौँ । दिदी त पहिले नै अचेत भई । म भने अर्धचेत अवस्थामा थिएँ । सई ममाथि आइलाग्यो । मैले जोडले ठेल्दा उत्तानो टाङ लगाएर लड्यो । अनि दिदीको शरीरसँग खेल्न थाल्यो । म उठ्न खोज्थेँ, सक्तिनथेँ । चिच्याउन चाहन्थेँ, आवाज निस्कँदैनथ्यो ।
हेर्दा हेर्दै ऊ शिथिल भयो । र, अर्धवस्त्रमै मकहाँ आयो । मेरो अधरमा बेस्कन टोक्यो । म जोडले चिच्याएँ । उसले बोतल खोल्यो र घटघटी पिलायो । अनि के भयो र के गर्यो, उही जानोस् । मेरो होस हरायो ।
बेलुकाको चार बजेको हुँदो हो मेरा आँखा खुले । दिदी घोप्टो परेर रोइरहेकी थिई । सई शान्तवना दिने प्रयासमा थियो । कपडा समेटेर लगाएँ । र, राताराता आँखा पारेर सई अगाडि उभिएँ । ऊ पनि हातमा पेस्तोल लिएर हान्ने पोजिशनमा उभियो । मैले ढुङ्गो टिपेँ । दिदी आएर रोकी ।
भनी, “हुन्दे बहिनी ! खुन–खराब गरेर इज्जत फर्कँदैन । छाडिदे । अर्कालाई मार्नु भनेको आफैँ जेलमा सड्नु हो । बाँच्न सकुञ्जेल एक कुनामा गएर बाचौँला । बाँच्न नसक्ने अवस्था आएछ भने जय माता कि भनेर सप्तकौशिकामा यो देहलाई विश्राम दिऔँला ।”
उसकै जित भयो । मेरो हातबाट ढ्ङ्गो तल खस्यो । मेरो शिर लत्रियो । सईले पनि पेस्तोल थाङ्को लगायो । वातावरणमा सन्नाटा छायो ।
गोजीवाट निकालेर १/१ गोली थम्याउँदै सईले मुख खोल्यो, “यो एकै खुराक ओखतीले गर्भमा केही अडिन दिँदैन । ढुक्कले खाओ । र, निश्चिन्त बन । मैले सयौँ जनामा प्रयोग गरेको छु । ओठमा हाँसो लिएर घर जाओ ।”
उसले दिएको गोली खायौँ । घरको साटो काठमाडौँ नै फर्किने निधो गर्यौँ । सईले नै गाडी चढाइदियो । मीन भवनस्थित कोठामा पुग्नासाथ झोलाहरू गेटभित्र राखिदिएको पायौँ । झोलाको गोजीमा आईडी कार्ड भएकाले गाडीवालाहरूले ल्याइदिएछन् ।
पहिले नै जँचाउन लाजले सकिएन । मिन्स हुन छाडेकाले दुई/तीन महिनापछि जाँच गराएको त, दुवैको गर्भ रहन गएछ । दुई–तीन ठाउँमा जजाउँदा पनि पोजेटिभ नै देखियो । फसाद पर्यो । निक्कै समय हामी विलखबन्दमा परिरह्यौँ । अन्ततः भु्रणको दोष नभएर परिबन्दमा पार्ने सईको दोष सम्झन पुग्यौँ । र, दुवैले एउटा नाटक रच्यौँ ।
हामी पुग्यौँ सईकहाँ । हाउभाउले उसलाई मोहित पारेर पहिलेकै ठाउँमा पुर्यायौँ । रक्सीले मतायौँ । र, दिदी अर्धनग्न भई पल्टिदिई । म सुरक्षाकर्मी बनेर ड्युटीमा बस्दी भएँ । जब सई पनि अर्धनग्न अवस्थामै दिदीको शरीरसँग जिस्कन थाल्यो । मेरो पालो चुच्चे ढुङ्गैढुङ्गाले खप्परै खप्परमा हानेँ । उसले पेस्तोल निकाल्ने कोसिस गर्यो । हातैहातमा हानेँ ।
‘मरेँ है आमा !’ भन्दै ऊ रन्थनिँदै उठ्यो । र, पर्तिर पुगेर पसारियो । मैले ढुङ्गा प्रहार गरिरहेँ । केही बेरमै ऊ निष्प्राण भयो ।
हामीले नजिकैको प्रहरी चौकीमा गई अपराध कबुल गर्यौँ । र, अहिले सदरमुकामस्थित प्रहरीको निरगानीमा हिरासतको जीवन भोगिरहेका छौँ ।
अरू मुनुको पत्रमा !
उही हजुरकी कान्छी छोरी,
जुनुले पत्र तयार पारेको सुइको मुनुले पनि पाइन् । उनलाई पनि बाबालाई पत्र लेखेर सत्य ओकल्ने मन भयो ।
म हजुरलाई पीडा थप्दै छु । सक्नु भए सहनुहोला । नसके दुईटी छोरी थिए, दुवै एकै पटक मरे भन्ठान्नुहोला । किनभने हामी दुवैले गर्भमा नाजायज सन्तान हुर्कारहेका छौँ । मातृवात्सल्यको भारले बेस्कन थिचिएका छौँ । नत्याग्न सक्छौँ, न हक्कीका साथ अपनाउन नै सक्छौँ किनभने समाजदेखि असाध्यै डराएका छौँ ।
अतः समाजले लादेको नियम र नीति कुल्चने निर्णय गर्यौँ । अपराधीको जिउने हक छिन्यौँ । र, पेटको अबोध बच्चालाई उसको नैसर्गिक हक दिलाउन प्रतिबद्ध भयौँ । हामी पनि अपराधी हुन मञ्जुर भयौँ । किनभने निर्मलाका अपराधी अँझै छाती फुलाएर हिँडेको सहन सकेनौँ । हाम्रो अवस्था पनि निर्मलाभन्दा एक इञ्च तलमाथि नहुने देख्यौँ । र, हामीले आफ्नै मनको शास्त्र उल्टायौँ, त्यसले जे भन्यो, त्यही गर्यौँ । कानूनको नजरमा अपराधी हौँ । तर, हजारौँ आर्तनाद गरिरहेका निर्मलाहरूका मनमस्तिष्कका अनमोल रत्न भयौँ ।
अघि नै भनेँ नि, छोरीहरूले पुर्खाको नाक काटे, समाजमा शिर ठाडो पार्न दिएनन् भन्ठान्नुहुन्छ भने हामीलाई मरेको ठान्नुस् । फर्केर आउँदैनौँ । ज्ञान छ, हातमा सीप छ, मनमा अँझै हिम्मत छ । हामी दिदी–बहिनी मिलेपछि सारा प्रतिकूल परिस्थिति परिवर्तन भएर अनुकूल बन्छ र बन्नुपर्छ । अब हामी आफ्नो संसार आफैँ सजाउन सक्छौँ । हजुरहरूलाई भरथेग गर्ने मन चाहिँ मर्ने पर्यो । यद्यपि प्रत्येक्ष नमिले परोक्ष नै सही हाम्रो सेवाभाव ज्युँदैरहने छ ।
बाबा ! अब हामीलाई पछुतो लाग्न छाड्यो । दुःख–पीडा पनि त्यसै हराएर गएको छ । आफ्नै पेट मुसार्छौं, वात्सल्य भारले पग्लन्छौँ । अपूर्व आनन्द आउँछ । जीवनमा सानो साथी मिल्ने कल्पनामा मन त्यसैत्यसै रमाउँछ । सारा बन्धन तोडेर खुल्ला आकाशमुनि नाच्न मन लाग्छ । पाखाभित्तामा उफ्रीउफ्री तराईको लोकभाका सुसेल्न मन लाग्छ ।
अब रिस मरिसक्यो । अब सिर्जना र सद्भावको नीलो बादल लागिसक्यो । स्वास्थ्यकर्मीका साथ दिनदिनैजसो महिला अधिकारकर्मीहरू आउँछन् । हाम्रो स्वास्थ्य जाँच गर्छन् । खानपिनको व्यवस्था बुझ्छन् । समस्या भए खुलेर राख्न उक्साउँछन् । र, सबै कुरा शुभ नै शुभ हुने आश्वासन दिएर जान्छन् ।
बाबा ! हाम्रो बारेमा रत्तिभर दुःख मनाउ नगर्नुहोला । मामूलाई पनि सम्झाउनुहोला । हवस् त, अरू बहिनीको पत्रले भनिसक्यो ! भुलमा माफी माग्दै यत्तिमै पत्रान्त गर्दछु । धन्यवाद !
हजुरहरूकी जेठी सन्तान,
मोवाइल नं. र इमेल – ९८४२८२९२०६
१. नाउँ, जन्म र जन्मस्थान– नन्दलाल आचार्य, २०३०।०३।२८, जहडा–लालसिसुवा, गाविस ठोक्सिला, उदयपुर ।
२. आमा/बाबु– भगवती/विष्णुप्रसाद आचार्य
३. हालको बसोबास र राष्ट्रियता– बेलका नगरपालिका–२, गल्फडिया, उदयपुर । अस्थायी– श्रीजनता मावि, गोलबजार–४, सिरहा
४. शिक्षा– बी. ए. , बी. एड. (नेपाली), एम. एड.
५. पढेको शिक्षण संस्था– श्रीजनता मावि, पुरन्दह, उदयपुर । श्रीमहेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, राजविराज, सप्तरी । श्रीबीपी बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरधाम । श्रीसुकुना बहुमुखी क्याम्पस, विराटचोक–सुकुना, मोरङ ।
६. पहिलो रचना र प्रकाशित मिति–
(१) कविता: कवि देवकोटा (सर्वश्री दैनिकमा, २०५४)
(२) निबन्ध: हडबडिएको मनका अक्षरहरू (सन्ध्या द्वैमासिक साहित्यिक पत्रिका, २०६२)
(३) हाँस्यव्यङ्गय एकाङ्की: छलछाम छात्ते छ पाटी (शब्दाङ्कुर मासिक साहित्यिक पत्रिका, २०६४)
(४) नाटक: प्रजातन्त्रका नवरसको सेरोफेरो (सत्यापन साप्ताहिक, २०५४)
(५) समालोचना: मधेश आन्दोलनले जन्माएको उपन्यास ‘घुर’ वर्ष: ३९/पूर्णाङ्क: १३७/असार–श्रावण: २०६५ अभिव्यक्ति मासिक पत्रिकामा)
(६) हाँस्यव्यङ्गय गीत/ कविता: मधुपर्क साहित्यिक मासिकको हाँस्यव्यङ्गय विशेषाङ्कमा गीत र फित्कौली साउन, ०६५मा हेलो, हेलो शीर्षकको कविता ।
७. प्रकाशित कृति सूचि–
‘युग उचाल्ने अक्षरकर्मीको अवसान’ नाटक/एकाङ्की सङ्ग्रह, २०६७ प्रकाशक– लक्ष्मी रिजाल ।
‘गरुराहा’ उपन्यास– २०७६, प्रकाशक– जामुनलाल स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाल ।
‘इच्छुक–बकपत्र’ (निबन्ध सङ्ग्रह, प्रेसमा), ‘टुक्के दिदी र उखाने दाइ’ (बालएकाङ्की, प्रेसमा), ‘गरिमा’ (कथासङ्ग्रह, तयारी हुँदै) ।
८. पुरस्कार, सम्मान, पदक, विभूषण, प्रशंसापत्र
(क) काठमाडौम्बाट राष्ट्रव्यापी ‘चियाचौतारी रेडियो कथालेखन प्रतियोगिता’मा पुरस्कृत (रु. ५,०००।– नगद),
(ख) ‘द्वन्द्व निवारण तथा शान्ति निर्माणमा प्रत्येक्ष सहयोग पुग्ने’ लेख लेखे वापत स्थानीय शान्ति समिति, सप्तरीद्वारा पुरस्कृत (रु. २,०००।– नगद सहित प्रमाणपत्र),
(ग) ‘साक्षरता नेपाल’ स्तम्भमा सर्वोत्कृत लेख लेखे वापत रु. १२,५००।– नगदले शिक्षक मासिक पत्रिका, काठमाडौन्द्वारा पुरस्कृत
(च) विश्व नेपाली साहित्य महासंघद्वारा न्यिदब िँभमभचबतष्यल ँयच ल्भउबष् िीष्तभचबतगचभ ९न्ँल्ी०द्वारा २०७२मा नगदसहित सम्मान ।
(ज) भानुभक्त आचार्य द्विशतवार्षिकी समारोह समितिद्वारा २०७१ सालमा गोल्ड मेडलसहित ’प्रशस्तिपत्र’द्वारा विभूषित ।
(झ) ‘आजको शिक्षा’ साप्ताहिक, काठमाडौम्बाट निरन्तर स्तम्भ लेखे वापत दोसल्ला र प्रशंसापत्र प्रदान ।
९. रूचि– अध्ययन, भ्रमण, शिक्षण र लेखन
१०. देश, विदेशको भ्रमण– स्वदेशका सबै मुख्य सहरहरू, भारतको बनारस र मुम्बई सहर ।
११. साहित्यका बारेमा कार्य– ‘सत्यसंयन्त्र’ साप्ताहिक र सत्यापनको ‘बालसंसार’ पत्रिकाको सल्लाहकार भई कार्यसम्पादन गरेको छु । अतिथि सम्पादकको रूपमा ‘शिक्षा–दीक्षा’ राष्ट्रिय मासिक र सम्पादक भई ‘मूलबाटो’ साहित्यिक इपत्रिका र ‘प्रयास’ इपत्रिकाको सम्पादन गर्ने अवसर पाएको छु । त्यसै गरी राजधानीबाट प्रकाशन हुने ‘जनमत’ र ‘शब्दाङ्कुर’ साहित्यिक मासिक पत्रिका एवं सगरमाथा साहित्य परिषद् र विश्व नेपाली साहित्य महासंघको आजीवन सदस्य पनिरहेको छु । त्यसै गरी सगरमाथा साहित्य परिषद्को कार्यसमितिको सचिव पदमा रही जिम्मेवारी समाल्दै आएको छु । त्यस्तै सगरमाथा अञ्चलबाट सल्लाहकार भई सगरमाथा अञ्चलस्तरीय विश्व नारी साहित्य संगठनको काम पनि हेर्ने मौका पाएको छु । विश्व नेपाली साहित्य महासंघको विश्व कार्यसमिति (२०१६–२०१९) को केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनित भएको छु ।
१२. सामाजिक कार्य– २०५२ सालदेखि शिक्षण पेशामा रही समाजसेवा गर्दै आएको छु । विविध सामाजिक संस्थाको सहयोगी एवं सल्लाहकार समेत रहेको छु ।
१३. गरिएका अन्य कार्य– उल्लेख्य छैनन् ।
१४. पेशा– शिक्षण र लेखन ।
१५. मोवाइल नं. र इमेल – ९८४२८२९२०६
nandalal.acharya — Sun, 09/06/2020 - 19:27
...प्रेम कथा प्रकाशन भएछ
यत्ति लामो कथा कसले पढ्ला भन्ने सोचेको थिएँ । पढेर सटीक मनोभाव व्यक्त गर्नुभएकोमा र कथा प्रकाशन गरेर संसारभर पुर्याइदिनुभएकोमा मझेरी सम्पादक, संयोजकज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।